गिनीज बुकमा समेत नाम लेखाईसकेका यी अभिनेताको खुल्यो यस्तो रहस्य! – Jagaran Nepal
गिनीज बुकमा समेत नाम लेखाईसकेका यी अभिनेताको खुल्यो यस्तो रहस्य!
बलिउड जस्तै एक इंडस्ट्री रहेको छ । जुन साउथ सिनेम हो, बलिउड अभिनेतालाई जस्तै उनीहरुले निकै माया पाएका छन् । साउथ अभिनेताको पनि निकै फ्यान रहेको छ ।
साउथ सिनेमाले लामो समयदेखि फ्यानको मनमा ठाउँ राख्न सफल भएको छ। अभिनेता नागार्जुन, चिरंजीवी, प्रभु देवा र मामूठी हामि सबैको मनमा बस्न सफल भएका छन् । प्रभास, महेश बाबू, दुलकर सलमान र अल्लू अर्जुन जस्ता स्टारलाई पनि निकै मन पराईन्छ ।
साउथ सिनेमामा यस्ता केहि अनुहार पनि छन् जसलाई दर्शकले निकै मन पराउँछन् र उनलाई हरेक फिल्ममा देख्न सक्छौ । उनी अरु कोहि नभई ब्रह्मानंदम हुन् । ब्रह्मानंदम तेलुगू सिनेमाको निकै चर्चित नाम हो । तपाईले साउथ फिल्म सधैँ नहेरेपनि तपाईले हेर्ने हरेक फिल्ममा ब्रह्मानंदम देख्नुहुनेछ। ब्रह्मानंदमको फ्यान यति छ कि उनलाई सोशल मीडियामा ट्रेंड गरिएको छ ।
उनले १९८७ मा फिल्म अहा ना पलांटाबाट अभिनयमा करियर सुरु गरेका थिए. उनले अहिलेसम्म १००० भन्दा धेरै फिल्ममा काम गरेका छन्। ब्रह्मानंदमलाई साउथको हरेक सुपरस्टारसँग काम गरेको देख्न सक्छौ । उनले महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, प्रभास, राम चरण, नागार्जुन आदिसँग काम गरेका छन् । ब्रह्मानंदमलाई उनको कमिक टाइमिंग, मजेदार भूमिकाको लागि चिनिन्छ ।
उनले तेलुगूका साथसाथै कन्नड र तमिल सिनेमामा काम गरेका छन् । भारतीय सिनेमामा आफ्नो योगदानको लागि ब्रह्मानंदम साल २००९ मा पद्मश्री पुरस्कार पनि पाईसकेका छन् । यस बाहेक उनको नाम गिनीज वर्ल्ड रेकर्डमा स्क्रीन क्रेडिट पाउने जीवित अभिनेता हुन् । साथै उनलाई आफ्नो कामको लागि फिल्मफेयर, सिनेमा अवार्ड र नंदी अवार्ड्स पनि दिईएको छ ।